Beta 13aad ee iOS XNUMX iyo iPadOS ayaa loo siidaayey horumariyeyaasha | Wararka IPhone
Toni Cortés | | macruufka 13, dhowr
The Beta 13th ee iOS XNUMX iyo iPadOS loogu talagalay horumariyeyaasha. Sida had iyo jeer dhacda markasta oo cusboonaysiin weyn laga sameeyo macruufka, toddobaadyada ka horreeya sii deyntaas rasmiga ah waa kuwo kacsan, sii deynta noocyada beta ee soo-saareyaasha si loo tijaabiyo.
Dhowr daqiiqo ka hor ayay hadda sii daayeen nooca toddobaad ee iOS13 iyo iPadOS ee beta.
Waxay umuuqataa taasi ma jiraan wax isbeddello bilic leh oo noocaan cusub ah. Sidii caadiga ahayd, cayayaanka yaryar ee laga helay cusboonaysiinta lixaad, oo ay soo sheegeen kuwa horumariya, ayaa la safeeyey. Xitaa waqti uma aannu helin inaan hadda soo dejino. Waxaan arki karnaa oo keliya in cabirkiisu uusan aad u sarreeyn, kaliya 319 MB. Tani waxay naga dhigeysaa inaan muujino in garaaf ahaan aysan jirin wax horumar ah.
Haddii aad horey u haysatid beta lixaad ama iPadOS rakibay waa mid aad u fudud. Kaliya waa inaad ku qasabtaa qalabkaaga inuu raadsado cusboonaysiinta nidaamka cusub, markii aad heshona, cusbooneysii.
Soo gal Guud> Cusboonaysiinta Software-ka.
Waxaad ka heli doontaa nooca cusub. Cusboonaysiinta.
Sida had iyo jeer, haddii aad hadda sameyso waxay qaadan doontaa waqti ka dheer sidii caadiga ahayd. Waxaa jira horumariyeyaal badan oo hadda ka soo degsanaya server-ka Apple. Haddii aad waxyar sugto, waqtiga soo dejintu aad buu u yaraan doonaa.
Maskaxda ku hay in beta-kani ay heli karaan oo keliya horumariyeyaasha. Iyaga ayaa loo bilaabay iyaga si ay si ballaadhan u tijaabiyaan ugana warbixiyaan cilladaha la ogaaday Apple. Haddii aad ku dhiirratid inaad isku daydo betas, maalmo ka dib markii la soo saaray nooca cusub, beta la yiraahdo dadweynaha ayaa la bilaabay, hadda oo aan lahayn xayiraad isticmaale. Waad rakibi kartaa adigoo raacaya kuweenna tutorial. Dabcan, nooca toddobaad, waxaad sugi doontaa dhowr maalmood. Maalmo aad u yar ayaa ka soo wareegtay tan iyo qaybtii lixaad ee iOS 13 iyo iPadOS. Waxay u muuqataa in ragga ka socda Cupertino ay si adag u shaqeynayaan. Tani waxay naga dhigeysaa inaan ka fikirno in toddobaadyo yar gudahood aan lahaan doonno cusbooneysiin muddo dheer la sugayay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 13 » Beta-dii 13aad ee iOS XNUMX iyo iPadOS ee loogu talagalay dadka wax dhisaya ayaa hada la soo saaray
Wax la mid ah ayaa ku dhaca qof (Waxaan u diiwaangashan ahay horumariye)
Adeegyaashu waa kuwo buuxa. In yar samir, waxaad arki doontaa sida ay u muuqato ... 🙂